Kedu ihe bụ TXT? | Martech Zone Mkpebiri
Martech Zone » Mkpebiri » Acronyms na-amalite na T	» TXT
Mkpọ okwu TXT
TXT bụ okwu mkpọ okwu maka Ndekọ ederede.
Ndekọ TXT bụ ụdị ndekọ aha sistemụ (DNS) nke nwere ozi ederede maka isi mmalite na mpụga ngalaba gị. Ị tinye ndekọ ndị a na ntọala ngalaba gị. A na-ejikarị ha iji kwado ikike nwe ngalaba yana iji guzobe ndekọ ndekọ email.